देख्दा मात्र भाग्य चम्किने १९० बर्षको कछुवा, ॐ ले,खि से,यर ग,रौँ! – My Blog
देख्दा मात्र भाग्य चम्किने १९० बर्षको कछुवा, ॐ ले,खि से,यर ग,रौँ!
No Comments on देख्दा मात्र भाग्य चम्किने १९० बर्षको कछुवा, ॐ ले,खि से,यर ग,रौँ!
कछुवालाई भाग्यको प्रतिक मानिन्छ । बिहान उठ्नासाथ कछुवा देख्न पाईयो भने त्यो दिन पूर्ण रुपमा सफल हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ ।त्यही भाग्यको प्रतिक कछुवा मात्र यस्तो प्राणी हो विश्वमा सबैभन्दा धेरै आयु भएको जनवार नै यही हो ।
← बिल्कुलै बेवास्ता नगरी ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला तपाईको जीवनमा धनको बर्षा हुनेछ → सुत्नुअघि पाथीभरा माताको दर्शन गर्दै ,यसरी भएको थियो ताप्लेजुङमा पाथीभरा देविको उत्पति सेयर गर्नुहोस्